SUNIDHI CHAUHAN အသက်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊ - အဆိုတော်
Sunidhi Chauhan အသက်၊ ရည်းစား၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊
နာမည်အမှန် Nidhi chauhan
အမြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) စင်တီမီတာ၌တည်၏ - 160 စင်တီမီတာ
မီတာအတွက် - ၁.၆၀ မီတာ
ပေလက်မ၌တည်၏ - ၅ '၃ '
အချစ် ရုပ်ရှင် (သရုပ်ဆောင်, Cameo): Ehsaas: The Feeling (၂၀၀၁)
တီဗီ (တရားသူကြီး) - အိန္ဒိယ Idol ရာသီ ၅ (၂၀၁၀)
အဆိုတော် (ဘောလီးဝုဒ်): 'Shastra' ရုပ်ရှင်၏ 'Ladki Deewani Ladka Deewana' (၁၉၉၆)
အယ်လ်ဘမ် (အဆိုတော်) Aira Gaira Nathu Khaira (၁၉၉၈)
မာရသီရုပ်ရှင် (အဆိုတော်): 'Sanai Choughade' ရုပ်ရှင်မှ Kande Pohe '(၂၀၀၈)
ပနျခြာပီရုပ်ရှင် (အဆိုတော်): 'Pind Di Kudi' (၂၀၀၄) ရုပ်ရှင်မှ Muqabla
တမီးလ်ရုပ်ရှင် (အဆိုတော်) Dhool ဇာတ်ကားမှ Kundu Kundu (၂၀၀၃)
တီလီကန်ရုပ်ရှင် (အဆိုတော်) Mallika ()) (၁၉၉၉)
ကန်နာဒါရုပ်ရှင် (အဆိုတော်) 'Hollywood' ရုပ်ရှင် (၂၀၀၃) မှ Aeeeyy Aeeyyii
ပါကစ္စတန်ရုပ်ရှင် (အဆိုတော်) 'Pyar Hi Pyar Mein' (၂၀၀၂) ရုပ်ရှင်မှ Peehu Peehu
• Filmfare RD Burman သည်သူမရဲ့သီချင်းဖြစ်သော Ruki Ruki Si Zindagi အတွက် Mast (၁၉၉၉) အတွက်အကောင်းဆုံးသောအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူအတွက်ဆု။
Kelvinator GR8! FLO အမျိုးသမီးဆု
•အိန္ဒိယရုပ်မြင်သံကြားအကယ်ဒမီ - GR8! GR8 အတွက်အမျိုးသမီးများဆုရရှိ ဂီတအတွက်အမျိုးသမီးများအောင်မြင်မှု
•အကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအဆိုတော်ဆုအတွက် Massal Award
• ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပြန်ဖွင့်အဆိုတော် (အမျိုးသမီး) အတွက် Dadasaheb Phalke ဆု
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရိုင်တက္ကသိုလ်မှဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်
မှတ်ချက်။ ဤအရာများနှင့်အတူသူမတွင်အခြားဆုများ၊ ဂုဏ်ထူးများနှင့်အောင်မြင်မှုများစွာရှိသည်။
မွေးနေ့ ၁၄ သြဂုတ် ၁၉၈၃ (တနင်္ဂနွေ)
အသက် (2019 ၌ကဲ့သို့) ၃၆ နှစ်
ကျောင်း Greenway ခေတ်သစ်ကျောင်း၊ နယူးဒေလီ
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း အဆင့် ၁၂
လိပ်စာ2ခ / 183, Winder Mayer, Andheri အနောက်, မွန်ဘိုင်း
ဝါသနာ ကခုန်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းခြင်း
ရေးရာ / ရည်းစား • Bobby Khan (ဒါရိုက်တာ / Choreographer)
• Hitesh sonik (ဂီတတေးရေးဆရာ)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် •ပထမအိမ်ထောင် - 2002
•ဒုတိယအိမ်ထောင် - ၂၀၁၄ Aprilပြီ ၂၄
ခင်ပွန်း / ဇနီး ပထမယောက်ျား - Bobby Khan (ဒါရိုက်တာ / Choreographer; ၂၀၀၂-၂၀၀၃)
ဒုတိယခင်ပွန်း Hitesh Sonik (ဂီတတေးရေးဆရာ)
ကလေးများ သူတို့က Tegh Sonik (၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသည်)
မိဘများ ဖခင် - Dushyant Kumar Chauhan (Shriram Bharatiya Kala Kendra ပြဇာတ်ရုံအနုပညာရှင်)
အမေ - အမည်မသိသော (အိမ်ဆောက်သူ)
မောင်နှမများ နှမ - ဆူနာဟားချောင်ဟန်း (အငယ်)
သရုပ်ဆောင် (များ) Amitabh Bachchan , Shah Rukh Khan , Aamir Khan
မင်းသမီး Rekha , Dixit
အဆိုတော် (များ) Lata Mangeshkar , Celine Dion Whitney ဟူစတန်၊ Sukhwinder Singh က , Shakira
ဂီတသမား မာရီယာကာရေး, ဘီယွန်းစေး
သီချင်း Mariah Carey မှ 'အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်၏ကလေးဖြစ်ပါစေ'
အရောင် (များ) အနီရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဝါရောင်
ခရစ်ကက် Sachin Tendulkar
အားလပ်ရက် Destination ကျူးဘား
ကားစုဆောင်းခြင်း Maruti Suzuki Ritz  ပက်ထရစ်
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 6-7 သိန်း / သီချင်း
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း
Sunidhi Chauhan အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Sunidhi Chauhan ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
Sunidhi Chauhan သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
သူမ၏ဖခင်သည်အခြေခံအားဖြင့် Uttar Pradesh မှဖြစ်သည်။
အသက် ၄ နှစ်မှာ Sunidhi Chauhan ဟာဒေသခံပွဲများနှင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်စတင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Sunidhi Chauhan (ကလေးဘဝ) နှင့်သူမ၏ဖခင် Dushyant Kumar Chauhan တို့နှင့်အတူ
စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ sushant Singh က rajput ဇနီး
သူမ၏ဖခင်သည် Ram ၏အခန်းကဏ္toကိုနှစ်စဉ်နယူးဒေလီရှိ Shriram Bharatiya Kala Kendra မှ Ram Lila တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်“ Tabassum” သည်ဒေလီတွင်ပြသခြင်းတွင် Sunidhi ကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီးသူမ၏ပြပွဲဖြစ်သော Tabassum Hit Parade တွင်တိုက်ရိုက်သီဆိုရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။
Sunidhi Chauhan (ကလေးဘဝ) နှင့် Tabassum (စင်တာ) နှင့် Sadhana Sargam (ညာ) နှင့်အတူ
အသက် ၈ နှစ်မှာ Sunidhi ဟာဂီတဒါရိုက်တာ Kalyanji ရဲ့ Little Wonders အဖွဲ့မှာအဓိကအဆိုတော်အဖြစ်ထင်ရှားလာတယ်။
Sunidhi သည်သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုမှမရှိခဲ့ပါ။ ရေဒီယိုနှင့်ရေပန်းစားသောအဆိုတော်များ၏ကက်ဆက်များကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်သီချင်းဆိုခြင်းကိုသင်ယူခဲ့သည်။
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်အင်္ဂလိပ်သီချင်းများလည်းစတင်သီဆိုခဲ့သည်။
သူမ ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်သူမကလေးများကိုအခြေခံသည့်ပထမဆုံးဂီတအယ်လ်ဘမ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူမ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုဖွင့်ပြီးနောက် Sunidhi သည်သူမ၏ 'န့်အသတ်များ' ကိုသဘောပေါက်ပြီးတေးဂီတတွင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသည် Gautam Mukherjee လက်အောက်တွင်ဂန္ထဝင်ဂီတတွင်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆ တွင်သူမက Doordarshan တွင်ထုတ်လွှင့်သောတေးဂီတအဖြစ်မှန်တီဗီဖြစ်သော Meri Aawaz Suno ကိုရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်သူမ Bollywood ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပွဲတွင် Shastra ရုပ်ရှင်အတွက်“ Ladki Deewani Ladka Deewana” သီချင်းကိုသီဆိုရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၈ တွင်သူမအယ်လ်ဘမ်တွင် 'Swapna Paree'၊ Govinda Kal Mere Ghar Aaya၊ Jiyo Magar Haske၊ 'Badra' နှင့် 'Chudiyan စသည့်ပုဒ် ၅ ပုဒ်ပါဝင်သော HMV ၏ Aira Gaira Nathu Khaira နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည်နောက်ခံအဆိုတော်အဖြစ် ၂ နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်မာ့တ်ရုပ်ရှင်အတွက်“ Ruki Ruki Si Zindagi” သီချင်းကိုမှတ်တမ်းတင်သောအခါသူသည်ကျော်ကြားမှုကြီးမားခဲ့သည်။ နာမည်ကြီးအဆိုတော်, နီဂမ်၏အဆုံး ထိုသီချင်းအတွက်ဂီတဒါရိုက်တာ Sandeep Chowtala အားသူမ၏အမည်အားအကြံပြုခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်အတွက်သူမသည်“ Suna Tha” သီချင်းကိုလည်းသီဆိုခဲ့သည်။
Sonu Nigam နှင့်အတူ Sunidhi Chauhan
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်ဆွန်ဒီသည်ဒါရိုက်တာ / Choreographer“ Bobby Khan” နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့အယ်လ်ဘမ် Pehla Nasha တွင်အလုပ်လုပ်စဉ်ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သို့သော်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကြာရှည်မခံခဲ့ကြ, သူတို့ကတစ်နှစ်အကြာတွင်ကွာရှင်းတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Sunidhi သည်အခြားအနုပညာရှင် ၁၆ ဦး နှင့်အတူ 'Zindagi Pukarti Hai' အမည်ရှိသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာငလျင်နှင့်ဆူနာမီဒဏ်ခံခဲ့ရသူများအတွက်ငွေရှာဖွေခဲ့သည်။
သူမသည်“ Heartbeat” သီချင်းနှင့်သူမ၏အသံကိုထုတ်ချေးခဲ့သည် Enrique Iglesias ။ ဤသီချင်း Enrique Iglesias '' အယ်လ်ဘမ်၏အထူးအိန္ဒိယထုတ်ဝေ Euphoria တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့တွင်ကျင်းပမည့် ၁၅ ကြိမ်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌သူမကအင်္ဂလိပ်သီချင်း“ Reach Out” ကိုသီဆိုခဲ့သည်။
ထိုနှစ်တွင်ပင်သူမသည်ရေဒီယိုစီးတီး ၉၁.၁ FM ရေနံနံနက်ပြပွဲဖြစ်သော Musical-E-Azam ကို Radio ည့်သည်ရေဒီယိုဂျိုကင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။
ရေဒီယိုစီးတီး 91,1 FM ရေရဲ့ဂီတ -E-Azam မှာ guest ည့်ရေဒီယိုဂျော်ကီအဖြစ် Sunidhi Chauhan
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကသူမအား Windows Vista“ Wow is Now” သီချင်းကိုဆိုရန်ငှားရမ်းခဲ့သည်။
သူမသည် 'Ehsaas: The Feeling' (၂၀၀၁)၊ 'Bhoot' (2003), 'Hawaa Hawaai' (2014) နှင့် 'Rangoon' (၂၀၁၇) ကဲ့သို့သောဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူမ၏သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အထူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Sunidhi Chauhan သည် Sita ၏အခန်းကဏ္ for အတွက် Jewel နှင့် 'Sons of Ram' (၂၀၁၂) ၏အခန်းကဏ္ for အတွက် 'Rio' (2011) ကဲ့သို့သောကာတွန်းကားများအတွက်သူမ၏အသံကိုထုတ်ချေးခဲ့သည်။
သူသည်ဟိန္ဒူ၊ ပန်ချာပီ၊ တမီးလ်၊ တီလီဂူ၊ မာရသီ၊ ဘင်္ဂလီ၊ ဂူဂျာရီးယား၊ ကန်နာဒါ၊
Sunidhi Chauhan ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်
kohli အလေးချိန်ဎအမြင့် virat
ဒဏ္legာရီအဆိုတော်, Lata Mangeshkar သူမ၏မျိုးဆက်၏ Numero Uno အဆိုတော်သူမ၏တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Lata Mangeshkar နှင့် Sunidhi Chauhan (ကလေးဘဝ)
Sunidhi Chauhan ကိုလည်းခေတ်သစ်ဗားရှင်းအဖြစ်လူသိများသည် Asha bhosle ။
Asha Bhosle နှင့် Sunidhi Chauhan
၂၀၁၂ 24ပြီ ၂၄ တွင်သူမငယ်စဉ်ကလေးဘဝသူငယ်ချင်းနှင့်တေးရေးဆရာတ ဦး နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ Hitesh sonik နှစ်နှစ်ထက်ပိုသောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက် '။
Sunidhi Chauhan နှင့် Hitesh Sonik ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားပုံ
hip hop tamizha ဇနီးအမည်
လက်ထပ်ပြီးနောက်သူသည် ၂၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးစင်ပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေစဉ်အသက်ရှူသံများလာသည်။ ထို့နောက်သူသည်အားကစားခန်းမတစ်ခုသို့ဝင်ပြီးပုံစံပြန်ဝင်လာရန်အတွက်တင်းကြပ်သောအစားအစာကိုစတင်လိုက်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူမနာမည်က Forbes Celebrity Top 100 စာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။
Sunidhi သည် Forbes ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းအဆိုတော်နှင့်ဂီတပညာရှင် ၅ ဦး လည်းဖြစ်သည်။
2013 ခုနှစ်တွင်သူမနှစ်ဆယ်ရှစ်ရာထူးမှာ FHM အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ 'ကမ္ဘာ့အလိင်အရှိဆုံးအာရှအမျိုးသမီး' ၏စာရင်းတွင်အမည်ရှိနှင့်လည်း MensXP ရဲ့ 'အပူဆုံးအမျိုးသမီးဘောလီးဝုဒ်ခေါင်းဆောင်အဆိုတော်။ ' တွင်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်
သူမသည်ကျော်ကြားသောပါကစ္စတန်တီးဝိုင်း 'Junoon' နှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့ပြီး 'Armaan' (2013) အပါအဝင်ပါကစ္စတန်ရုပ်ရှင်အများအပြားအတွက်သီဆိုခဲ့သည်။
တစ်ချိန်ကသူမ Khalid Kidwai ၏ရုပ်ရှင်အတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်စီစဉ်ထားပြီးသူပင်လည်ပတ်ခဲ့သည် Kailash kher 's စတူဒီယိုကမှတ်တမ်းတင်ရန်။ သူမသည် Khalid Kidwai နှင့်ဒါရိုက်တာ Ranjeet Gupta တို့အားသီချင်းထဲတွင်အချို့သောရဲရင့်သောနိုင်ငံရေးအသံများကြောင့်သီချင်းအချို့ကိုပြောင်းလဲရန်ပြောသော်လည်းလိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး Indu Sonali ကိုသီချင်းသီဆိုရန်ပေးခဲ့သည်။
Sunidhi Chauhan သည် 'India Idol' Season5&6(2010 & 2012)၊ 'The Voice India' (2015), 'The Remix' (2018) နှင့် 'Dil Hai Hindustani' ရာသီ2တို့ကဲ့သို့သောသီဆိုသည့်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ 2018) ။
Sunidhi Chauhan သည် 'The Voice India' (၂၀၁၅) ကိုစီရင်ခဲ့သည်
2016 ခုနှစ်တွင်သူမ Priya ၏ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ played ပေးသော '' Priya Playing, '' ရုပ်ရှင်အတိုကိုပြု၏။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်သီချင်း ၂၅၀၀ ကျော်သီဆိုခဲ့သည်။
Sunidhi သည်တက်ကြွသောပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သူမသည်အမျိုးမျိုးသောပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်ပွဲများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
Chauhan သည် John Lennon ၏ 'Imagine' ဂီတဗီဒီယိုအတွက်သူမ၏အသံကိုထုတ်ချေးခဲ့သည်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ '၂၅ နှစ်မြောက်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း' ကိုဂုဏ်ပြုရန်ယူနီဆက်ကကမ္ဘာချီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Sunidhi ၏အဆိုအရသူမ၏အသံသည်မင်းသမီးများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည် Priyanka chopra , ကက်ထရီနာ Kaif , Kajol , Parineeti chopra နှင့် Urmila Matondkar ။
ကျား shroff ၏အမည်ရင်းကဘာလဲ
munmun dutta ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲ
salman khan house ၏ပုံရိပ်
asha parekh မွေးနေ့
ဆ။ v ။ မွေးဖွားခြင်း၏ prakash kumar ရက်စွဲ